Inkcazo yeGesi yamanzi kunye nokuSebenza
Inkcazo yeGesi yamanzi
Ukusebenzisa Amanzi Ukuvelisa Hydrogen
Igazi yamanzi ngumbane ovuthayo oqukethe i-carbon monoxide (CO) kunye negesi ye-hydrogen (H 2 ). Igazi yamanzi yenziwa ngokudlula umbane phezu kwama- hydrocarbon eshushu. Impendulo phakathi kwe-steam ne-hydrocarbons ivelisa i-gas synthesis. Impendulo yokuguqula igesi ingasetyenziselwa ukunciphisa amanqanaba e-carbon dioxide kunye nokucebisa umthombo we-hydrogen, okwenza amanzi agesi. Ukuphendulela kwe-gas-shift reaction:
I-CO + H 2 O → CO 2 + H 2
Impendulo yokutshintsha kwegesi yamanzi yaqale ichazwa ngo-1780 nguFilice Fontana ongumFaliyane.
Ngowe-1828, i-gesi yamanzi yaveliswa eNgilani ngokuvuthela i-steam kwi-coke emhlophe. Ngowe-1873, iThadede SC Lowe inelungelo lomsebenzi owawusebenzisa ukusabela kwe-gas-shift response to enrich the gas with hydrogen. Kwindlela yeLowe, i-steam ephosakeleyo yadutshulwa phezu kwamalahle atshisayo, ngokufudumala kugcinwe kusetyenziswa ii-chimneys. Igazi eliye laphuma laphehlizwa kwaye lahlulwa ngaphambi kokusetyenziswa. Inkqubo kaLowe yabangela ukunyuka kweshishini lokushisa igesi kunye nokuphuhliswa kweenkqubo ezifanayo kwezinye iigesi, njengenkqubo yoHaber-Bosch yokwenza i-ammonia . Njengoko i-ammonia yafumaneka, i-friji ye-friji yenyuka. ULowe wabamba iipententi zemishini yeqhankqalazi kunye nezixhobo ezihamba ngegesi ye-hydrogen.
U ku velisa
Umgaqo wemveliso yegesi yamanzi ichanekileyo. I-Steam iyanyanzeliswa ngotshisi obomvu okanye obushushu obushushu bekhabhoni, eyenza ukuphendula okulandelayo:
H 2 O + C → H 2 + CO (ΔH = +131 kJ / mol)
Le mpendulo isiphezulu (ithatha ukushisa), ngoko kufuneka ukushisa kudibaniswe ukugcina.
Kukho iindlela ezimbini oku kwenziwa ngazo. Enye ifuna ukutshintshana phakathi kwomoya kunye nomoya ukubangela ukushisa kwekhabhoni enye (inkqubo ephazamisayo):
O 2 + C → CO 2 (ΔH = -393.5 kJ / mol)
Enye indlela ukusebenzisa i-oxygen gesi kunokuba umoya, ovelisa i-carbon monoxide kune-carbon dioxide:
O 2 + 2 C → 2 CO (ΔH = -221 kJ / mol)
Iifom ezahlukeneyo zeGesi
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zegesi yamanzi. Ukubunjwa kwegesi ephuma kukuxhomekeke kwinkqubo esetyenziselwa ukuyenza:
I-gas yokushintshiswa kwegesi yamanzi - Leli gama linikwe igesi yamanzi eyenziwe ngokusebenzisa ukutshintsha kwe-gas-reaction reaction ukuze ifumane i-hydrogen ecocekileyo (okanye ubuncinane i-hydrogen enothileyo). I-carbon monoxide ukusuka ekuphenduleni kokuqala isabela ngamanzi ukususa i-carbon dioxide, ishiya kuphela i-hydrogen gas.
Igesi yamanzi -Imigodi yamanzi ngumxube wegesi yamanzi kunye negesi lomvelisi. Umshicileli wegesi ligama lepetroli ephuma kwilahle okanye i-coke, ngokuchasene negesi yendalo. I-gesi yamanzi yenziwe ngokuqokelela i-gesi eyenziwa xa i-steam ishintshwe ngomoya ukuba ikhusele i-coke ukuze igcine ukushisa okwaneleyo ukugcina ukuphendula kwegesi yamanzi.
Igazi yamanzi ephuthukileyo - Igazi yamanzi ekhutshiwe iveliswa ukwenzela ukuphucula umbane wamandla egesi yamanzi, ngokuqhelekileyo kuncinci kunegesi yamalahle. Igazi yamanzi ihluthwa ngokuyidlulisa ngomlilo ophucukileyo oye waphuzwa ngeoli.
Ukusetyenziswa kweGesi yamanzi
Iigesi zamanzi ezisetyenziselwa ukuhlanganiswa kweenkqubo ezithile zoshishino:
Ukususa i-carbon dioxide kwii-fuel cells.
Iphendulwe ngephasi yerhasi ukwenza i-gas fuel.
Isetyenziswe kwinkqubo yeFischer-Tropsch.
Ukusetyenziswa ukufumana i-hydrogen ecocekileyo ukwenza i-ammonia.
I-Chemistry Inkcazo yeLigand
I-Vapor Pressure Definition
Inkcazo kaMthetho kaGraham
Ukunyelisa uMoya oyiNgcwele
Iintlobo ze-10 ze-Women's Hairstyles
Isiqalo sokuqala sokuzalwa kukaKrisimesi: Yadalwa nguSanta Francis wase-Assisi
Ice Dance Umfanekiso wee-Skaters Kim Navarro kunye neBrent Bommentre
Iingoma eziyi-100 eziphezulu zeengoma ze-Pop
Iimpawu eziziwayo malunga nobuhlobo
Inkcazo yeBumba kwi-Art
Lewis Waterman - Umthombo wamanzi
I-TPC Sawgrass Imifanekiso: I-Course Course
Uphando lwabadala bamaJamani
Kutheni Iingxaki Zobungqina Bokuthi UThixo Uthukuthelele Zonke Ixesha?
Imfazwe YaseMerika: iMfazwe yaseEzra